Hargaysa(Gebogebonews)-Wasiirkii hore ee maaliyada somaliland ee xukuumadii Daahir Rayaale Ambassador Xuseen Cali Ducaale(Cawil) ayaa Ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee wakhtigan ka taagan somaliland.
Amb Cawil ayaa talooyin u diray madaxweynaha somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Waddani. Amb Cawil ayaa ugu horayn hadalkiisa ku bilaabay aragtida uu ka qabo talaabadii ay ciidamada somaliland kula wareegeen Tukaraq waxaanu yidhi “Dawlad kasta oo somaliland ka dhisan waajib ayaa ka saaran inay xuduudeeda sugto, tan imika ee Tukaraq-na dalkeenii ayeynu ku jirnaa oo meel aan maamulkeenu gaadhin ayey ciidankeenu imika gaadheen, xuduudana waa la sugi doonaa waana hubaal taasi.” Ayuu yidhi Amb Cawil oo u waramay HCTV.
Halkan Hoose Ka Daawo Muqaalka Waraysigani Oo Dhamays Tiran.